virtual currency Archives - Technology Khabar
भारतमा केन्द्र सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। गत मार्चमा भारतको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै भारतीय सरकारले नयाँ कदम चालिरहेको छ। सर्वोच्च […]
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने- भर्चुअल करेन्सी बारे लगानीकर्ताहरुबिच सचेतना फैलाऔं
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता भर्चुअल मुद्राको कारोबार गर्न सकिने तर्फ ईंगित गर्दै त्यसबारेमा सचेतना फैलाउनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार भर्चुअलरुपमा आयोजना गरिएको नेपाल धितोपत्र […]
यदि तपाईंको विवाह मिति लकडाउनको कारण सरेको छ भने, अब तपाईं भर्चुअल विवाह गर्न सक्नुहुनेछ। हो यो टेक्नोलोजी र इन्टरनेटको युगमा सम्भव छ र यसले तपाईंको अतिरिक्त पैसा खर्च गराउँदैन्। […]
काठमाडौं, १८ मंसिर । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट बचाउनका लागि भर्चुअल करेन्सी ल्याउने घोषणा गरेका छन् । भेनेजुएलाको तेल, ग्यास, सुन र हीरा उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिने […]